Vahoaka: Aza mampiasa zava-mahadomelina kankana biby ho an'ny COVID-19
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fahasalamana » Vahoaka: Aza mampiasa zava-mahadomelina kankana biby ho an'ny COVID-19
Vaovao farany Brezila • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • Safety • Tourism • Vaovao isan-karazany
Fanafody biby tsy natao ho an'ny olombelona
Health Canada dia namoaka fangatahana maika ny olom-pireneny mba tsy hampiasa fanafody fanafody fanafody antsoina hoe Ivermectin hitsaboana COVID-19 na hanandrana hisorohana ny fahazoana ny coronavirus.
Ivermectin dia mpamatsy antiparasite amin'ny endrika takelaka, paty, vahaolana am-bava, vahaolana azo tsindrona, premix medikaly, na lohahevitra.
Health Canada dia namoaka fanambarana ho an'ny mpiray tanindrazana milaza fa raha novidiana noho io antony io fanafody io dia ario avy hatrany.
Ny mpitsabo iray momba ny fahasalamana dia tokony hifampidinika raha efa nampiasaina io vokatra io ary misy olana ara-pahasalamana.
Ny olombelona mampiasa zava-mahadomelina biby na fomba hafa dia tsy zava-baovao raha resaka olana ara-pahasalamana no resahina. Ny sefon'ny fikambanan'ny mpitsabo indianina dia tsy maintsy nampitandrina ny olom-pirenena indiana amin'ny fomba fanao manarona tena a zezika omby sy fifangaroan'ny urine ho toy ny fanafody coronavirus.
Health Canada dia nahazo momba ny tatitra momba ny fampiasana ivermectin veterinary mba hisorohana na hitsaboana COVID-19. Ny Kanadiana dia tsy tokony mihinana vokatra ara-pahasalamana natokana ho an'ny biby satria mety hampidi-doza azy ireo ny fahasalamana.
Amin'ity hazavana ity dia manoro hevitra ny Kanadiana ny Health Canada mba tsy hampiasa na ny kininina veterinera na olombelona an'ny Ivermectin hisorohana na hitsaboana ny COVID-19. Tsy misy porofo manamarina fa ny ivermectin na ny famolavolana dia azo antoka na mandaitra rehefa ampiasaina ho an'ireo tanjona ireo. Ny kinova ivermectin ho an'ny olombelona dia omena amidy any Canada ihany ho an'ny fitsaboana ny aretin-kankana parasito amin'ny olona.
Ny kinovan'ny veterinera an'ny ivermectin, indrindra amin'ny fatra avo, dia mety hampidi-doza ho an'ny olombelona ary mety hiteraka olana ara-pahasalamana lehibe toy ny fandoavana, fivalanana, fihenan'ny tosidra, ny fihenan'ny alika, ny fanina, ny hainteny, ny koma, ary na dia ny fahafatesana aza. Ny vokatra Ivermectin ho an'ny biby dia manana fatra mifantoka avo kokoa noho ny vokatra ivermectin ho an'ny olona. Ny departemanta dia mahafantatra ny tatitra marobe momba ny marary any Etazonia izay nitaky fanampiana ara-pitsaboana ary naiditra hopitaly taorian'ny fampiasana ivermectin natao ho an'ny soavaly.
Ny Health Canada dia manara-maso akaiky ny fitsaboana azo tsaboina rehetra mety ho an'ny COVID-19, ao anatin'izany ny fitsaboana dinihina amin'ny fitsapana ara-pitsaboana iraisam-pirenena. Hatramin'izao, Health Canada dia mbola tsy nahazo fanolorana zava-mahadomelina na fangatahana fitsapana ara-pahasalamana ho an'ny ivermectin ho fisorohana na fitsaboana COVID-19.
Ho an'ireo zava-mahadomelina izay mety hanampy amin'ny fitsaboana COVID-19, ny Health Canada dia mamporisika ireo mpamokatra zava-mahadomelina hanao fitsapana ara-pahasalamana. Izany dia hanome fotoana iray ho an'ny vondrom-piarahamonina fitsaboana mba hanangona vaovao momba ny fahombiazan'ny fitsaboana sy ireo loza mety hitranga.
Raha misy mpanamboatra manome fandefasana amin'ny Health Canada mifandraika amin'ny fampiasana ivermectin hisorohana na hitsaboana ny COVID-19, ny Health Canada dia hanao fanombanana ara-tsiansa momba ny porofo hamantarana ny kalitaon'ny zava-mahadomelina, ny fiarovana azy ary ny fahombiazany.
Ny Health Canada dia hanohy hanara-maso ny toe-javatra ary handray andraikitra mety sy ara-potoana raha toa ka misy vaovao vaovao, ao anatin'izany ny fampahalalana rehetra momba ny doka tsy ara-dalàna na fivarotana ivermectin. Health Canada dia hampita vaovao momba ny fiarovana vaovao amin'ny mpitsabo sy mpanjifa ara-pahasalamana ihany koa.
Ny Health Canada dia efa nampitandrina ny kanadiana taloha momba ny vokatra manao fanambarana diso sy mamitaka hanasitranana na hanasitranana ny COVID-19. Raha mila fanazavana momba ny vaksinina ara-pahasalamana ara-pahasalamana any Canada dia tsidiho ny Canada.ca.
Ivermectin, vokatra fanafody fanafody, dia nahazo alalana amidy any Canada ho an'ny fitsaboana ny aretin-kankana parasitika amin'ny olona, ​​indrindra ny strongyloidiasis tsinay sy ny onchocerciasis, ary tokony hampiasaina ho an'io tanjona io ihany, eo ambany fanaraha-mason'ny matihanina momba ny fahasalamana. Misy kinova veterinera an'ity fanafody ity azo tsaboina ny aretin-katsentsitra amin'ny biby. Tsy tokony hampiasa ny kinovan'ny biby an'ity vokatra ity mihitsy ny olona.
Ny tokony hataon'ny mpanjifa
Raha novidiana ivermectin ho fisorohana na fitsaboana COVID-19 dia ajanony ny fampiasana azy dia ario. Araho ny torolàlana monisipaly na isam-paritra momba ny fomba fanariana fako simika sy fako mampidi-doza hafa, ary avereno amin'ny vokatra amidy ny vokatra mba hanariana azy araka ny tokony ho izy.
Manantona dokotera mpitsabo raha efa nampiasaina ivermectin ary misy olana ara-pahasalamana. Tatero any amin'ny Health Canada ny vokatra hafa avy amin'ity vokatra ity. Mametraha fitarainana any amin'ny Health Canada raha tokony ho fantatra ny mombamomba ny dokam-barotra na fivarotana ivermectin tsy ara-dalàna na vokatra ara-pahasalamana hafa mampiasa ny taratasy fitarainana an-tserasera.